एकताका लागि संयुक्त हस्ताक्षर विकल्प होइन « Drishti News – Nepalese News Portal
शान्ता चौधरी, केन्द्रीय सदस्य, नेकपा एमाले
३२ श्रावण २०७८, सोमबार 7:14 pm
काठमाडौं । नेकपा एमालेको विवाद उत्कर्षमा पुग्दा दुवै समूह आ–आफ्नै गतिविधिमा केन्द्रित छन् । यसले पार्टी एकताको माहोल झनै बिग्रदै गएको छ । एमाले विवाद समाधान सम्बन्धमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहले के सोचिरहेको होला ? तेस्रो तहका नेताले के सोचिरहेका होलान् ? यसै बिषयमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहका नेता शान्ता चौधरीसँग ‘एमाले एकताको विन्दु’ पेरिफेरिमा दृष्टिन्यूजका सन्तोष साहले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छः
-पार्टीलाई एकतावद्ध गर्ने प्रयास धेरै भयो तर किन सफल हुन सकेन ?
हामीले कोसँग पार्टी एकता गर्ने ? पार्टी एकता गर्नका लागि दुई पार्टी हुनुपर्यो नि । पार्टी एकता त दुई पार्टीबीच हुने होला नि । त्यसकारण मेरो प्रश्न– हामीले कुन पार्टीसँग एकता गर्ने ? यहाँ पार्टी एकताको सन्दर्भ होइन । आन्तरिक विवाद मिलाउने सवाल हो ।
-एउटै पार्टीमा समानान्तर गतिविधि हुँदै आएको छ । त्यसलाई के भन्ने नि ?
पार्टीभित्र विभिन्न समूह हुन्छ, अन्तरद्वन्द्व हुन्छ । अन्तरविरोध हुन्छ, अन्तरसम्वाद हुन्छ । पार्टीभित्र फाटो हुन्छ, त्यो फाटोलाई मिलाउनेतर्फ पो जानुपर्छ । पार्टी एकता गर्ने कुरा होईन नि त्यो त ।
-त्यही मिलाउने कुरा चाहिँ के कुरामा अड्कियो ?
पार्टी भित्रको समस्या समाधान गर्न नेताहरू लाग्नुभएको छ । पार्टी मिलाउने कुरामा हामी यति धेरै छटपटिनु पर्दैन जस्तो लाग्छ । पार्टीका समस्याहरू समाधान हुन्छन्, पार्टी मिल्छ, आतिनु पर्दैन । पार्टीभित्र यस्ता गतिविधि देखिनु स्वभाविक हो । अहिले अलिकति चर्को रूपमा देखिएको छ । केही समयपछि समाधान हुन्छ । चिन्ता गर्नुपर्दैन ।
-पार्टीलाई एकतावद्ध गर्ने १० बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयन भएन । यस्तो अवस्थामा पार्टी विभाजन हुँदैन ?
तपाईं कसरी ठोकुवा गर्नुहुन्छ कि पार्टी फुट्नै लाग्यो भनेर ? पार्टीभित्र यस्ता समस्या आउँछन् । त्यो १० बुँदे पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्या समाधानका लागि हो ।
पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्याहरू समाधानका लागि नेताहरु एक ठाउँमा बसेर निचोड निकालेको प्रस्ताव हो । त्यो १० बुँदे दुवै पक्षले तयार परेको दस्ताबेज हो । १० बुँदेबाट पछि हट्नुपर्ने कसैलाई कुनै कारण छैन । तर, १० बुँदेबारे माधव कमरेडमा केही समस्या देखियो । उहाँका केही असहमति होलान् । तर, उहाँ जतिको नेताले पार्टी नै फुटाएर जानुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । पार्टी फुट्दैन, मिल्छ चिन्ता नगर्नुस् ।
-माधव कमरेडमा देखिएको समस्या के हो ?
उहाँमा के समस्या देख्नुभो ? भनेर मलाई नसोध्नु होला । उहाँलाई नै सोध्नु पर्छ नि । पार्टीको समास्या समाधान गर्न के कुराले छेक्यो ? भनेर उहाँलाई नै सोध्नुपर्छ । तपाईं जतिको नेताले किन पार्टी फुटाएर जान खोज्नु भएको हो ? भनेर उहाँलाई नै सोध्नुपर्छ । उहाँमा के समस्या छ ? भन्दै मलाई सोधेर हुँदैन ।
-समस्या उहाँमा देखियो भन्नु भयो नि ?
समस्या त देखिएको छ नि । तपाईंहरू जतिको पत्रकारले के समस्या छ ? भन्ने कुरा मैले भनिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन । उहाँ के समस्यामा रूमल्लिनु भएको छ ? कुन समस्याबाट ग्रसित हुनुहुन्छ ? भन्ने कुरा सबैले बुझिसकेका छन् । उहाँको विषयमा मैले धेरै टिकाटिप्पणी गरिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन ।
-माधव समूहले छुटै पार्टी गठन गर्न लागेको सुनिन्छ, तपाईंको समूहमा त्यो विषयमा छलफल हुँदैन ?
म त्यो समूहको मान्छे परिन । हामी त पार्टी एकताको पक्षमा छौं । पार्टी विभाजन गर्ने विषयमा हामीले छलफल गर्ने कुरा हुँदैन । त्यसकारण मैले यस विषयमा के जवाफ दिने ? यदि जवाफ नै दिनु परे पनि नयाँ पार्टी गठन गर्ने कुरा हुन सक्दैन भन्छु । किनभने उहाँ जतिको नेताले पार्टी चाहिँ किन फुटाउनु होला ? यसबारेमा थप कुरा जान्न त उहाँलाई नै सोध्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई ।
-तपाईंहरूको समूहले एक्लौटी गतिविधि गर्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा पार्टी एक रहला ?
पार्टीको छलफल बैठकहरू चल्दै आएको छ । सबै छलफल बैठकमा उहाँहरूलाई खबर गरिएको छ । कुनै व्यक्ति बैठकमा सहभागी नहुने, कुनै समूहका मान्छे नआउनुसँग कुनै सम्बन्ध छैन । एमाले भित्रका मान्छे आउँछन्, केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दा केन्द्रीय सदस्यहरू आउनुहुन्छ । बाँकी असन्तुष्ट नेताहरू केही समय नआउनुलाई असहज मानिँदैन । पछि आफै आउनुहुन्छ ।
-भनेपछि बैठक बहिष्कार गर्नेहरू एमाले होईनन् ?
त्यस्तो होईन । नेकपा एमालेको बैठक बस्छ, बैठकमा एमालेका साथीहरू सहभागी हुनुहुन्छ र बैठकमा सहभागी नहुने नेता एमालेको नेता होईन भनेर भन्न मिल्दैन । उहाँहरूको केही असन्तुष्टि होला, केही समस्याहरू होलान्, उहाँहरूको केही आफ्ना कुराहरू होला । केही समयपछि उहाँहरू पनि बैठकमा भाग लिनुहुन्छ ।
-उहाँहरूको असन्तुष्टि कहिले सम्बोधन होला ?
कस्तो खालको असन्तुष्टि हो त्यसमै भरपर्छ । म एमालेको अध्यक्ष होइन, एमाले असन्तुष्ट पक्षको नेता होइन । नेताहरू मिलाउँदै हुनुहुन्छ, विस्तारै मिल्छ भन्नेमा आशावादी छु । नमिल्नुको कारण के हो ? दुवै नेतालाई एकठाउँमा राखेर सोध्नुपर्छ ।
-किन एक्लौटी रुपमा विधान अधिवेशन तोक्नु भयो ?
एकपक्षीय रूपमा अगाडि बढ्ने कुरै हुँदैन । एमालेको बैठक भनेपछि एकपक्षीय हुन्छ त्यो ? एमालेको अधिवेशन भनेपछि के त्यो एकपक्षीय हुन्छ ? एमालेको भनेपछि एकपक्षीय वा दुई पक्षीय भन्ने हुँदैन । साथीहरू एमाले हुनुहुन्छ, एमालेको नेता हुनुहुन्छ भने आउनुहुन्छ । अब एमाले हुनुहुन्न भने आउनुहुन्न, कति दिन पर्खने ? त्यसकारण एमालेको बैठकले गरेका निर्णयहरूलाई एकपक्षीय भन्न मिल्दैन ।
-भनेपछि मिल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसक्नु भएको हो ?
किन त्यस्तो हुन्छ ? के भाछ र, हामीभित्र त्यस्तो ? अलिअलि विवाद भाछ, विवाद समाधान हुन्छ । एकै ठाउँमा, सँगै बस्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको जस्तो लाग्दैन मलाई ।
-त्यसो भए एक हुने आधार के ?
प्रचण्ड जस्तो मान्छेसँग त कुनै बेला एकता गरेर अगाडि बढेका थियौं भने, आफ्नै पार्टीका नेतासँग मिल्न हामीलाई के समस्या ? आफ्ना कमी कमजोरी सुधार गर्नुभयो भने उहाँसँग एकता गरेर अगाडि बढ्न तयार छौं । आफ्नै पार्टीभित्रका नेतालाई नआउनु, हामी एकपक्षीय रूपमा अगाडि बढछौं, महाधिवेशन एकपक्षीय रुपमा गर्छौं, एकपक्षीय रुपमा पार्टी चलाउँछौं भनेर हुन्छ ? त्यस्तो हुनै सक्दैन ।
-उहाँहरूले समान हैसियतमा संयुक्त हस्ताक्षर भए मात्र एक हुन सकिन्छ भन्दै हुनुहुन्छ । यसमा तपाईंको धारणा के ?
विभिन्न प्रस्तावहरूमा छलफल चलिरहेको छ । नेताहरू आन्तरिक गृहकार्यमै हुनुहुन्छ । तर, विधानमै नभएको व्यवस्था कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? त्यो सम्भव छैन । दुई नेताको संयुक्त हस्ताक्षर विधानमै छैन । यो सम्भव हुन सक्दैन ।